Muxuu yahay xukunka qofka markasta gaalo ka cabsanaya?(Maqal) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated May 1, 2016 183 0
Dad badan oo ku nool qurbaha iyo kuwo jooga deegaanada shisheeyaha iyo kaaliyaashiisu qabsadeen ee soomaaliya ka tirsan ayaa ku nool walaac iyo walba haar sababtoo ah waxay ka baqayaan in la xiro.
Markii dagaalada jihaadka ah dalal kala duwan ka bilowdeen hay’adaha sirdoonka ree rgalbeedka iyo kuwa la shaqeeya waxay bilaabeen in ay qab qabtaan ama daba galaan dadka lagu tuhmiyo in ay aamisanyihiin in la jihaado taas ayaana keentay in baqdinto kororto.
Sheekh Jaamac Cabdi-salaam oo ka mid ah culumada Diinta Islaamka ayaa wareysi ay la yeelay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan lagu weydiiyay su’aalo la xariira waxa xukunkiisu yahay qofka mar kasta gaalada ka baqaya halkuu Allaah ka baqi lahaa.
Waxaa kale oo sheekhu ka hadlay xukunka kuwa shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa la shaqeeya.
Sidoo kale wuxuu ka jawaabay su’aal ku saabsan dadka ku dooda in aanay dhinacyada maanta caalamka ku hardamaya ee kala ah Mujaahidiinta iyo shisheeyaha iyo wuxuu unkay oo saf ah aanay midkoodna taageersanayn.
Dhageyso Wareysiga Sheekh Jaamac Cabdi-salaan.lite